Gawaarida Magaalada ayaa Lagu Badiyaa Van RayHaber | raillynews
HometareenkaNadiifinta Basaska Dadweynaha ee Van
19 / 01 / 2018 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Van gudaheeda, basas dayuurad maalinle ah oo ka tirsan Degmada Metropolitan, oo ay isticmaalaan 50 kun qof, ayaa lagu nadiifiyaa cudurrada faafa.
Ka gudubka kaarka Belvan ee gaadiidka dadwaynaha ee Van iyo in uu keeno tayada gaadiidka ee la soo saaro casriyeynta, Degmada Metropolitan ayaa ku dartay mid cusub adeegyadeeda goobtan. Daraasadaha nadaafadda ayaa lagu sameeyaa basaska si looga hortago faafidda fayruusyada keena cudurrada faafa sida hawada qabow. Ka dib marka basaska la nadiifiyo maalin kasta by kooxaha nadiifinta ee leh nadiifinta nadiifinta, kuraasta rakaabka, qaybta hoose ee kuraasta, badhamada, dirjeerka, daaqadaha daaqadda, taayirrada, shaashadda darawalka iyo kuwa rakaabka ayaa lagu nadiifiyaa daryeel weyn. Marka lagu daro nadiifinta guud, baabuurta waxaa lagu daaweeyaa daawooyinka gaarka ah ee looga hortago infakshannada hargabka ee waqtiyada qaarkood.
Si loo hubiyo in muwaadiniinta ay u safraan jawi caafimaad leh oo nadiif ah, basaska ayaa la nadiifiyaa habeen walba geeska hoostiisa Markaad ka hortagto cudurrada infakshanka xilliyeed, basaska waxaa lagu nadiifiyaa qalabka gaarka ah ee nadiifinta ee loo isticmaalo isbitaallada si joogto ah. Sidaas daraadeed, baabuurta gaadiidka dadweynaha waxaa laga sii daayaa fayraska si dhakhso ah ugu soo saari kara goobaha xiran. Hadafkayagu waa inaan hubinno muwaadiniinteena inay u safraan tayada iyo caafimaadka. "
Basaska degmada waa la nadiifiyaa
Maanta taariikhda: 20 January 1954 Train in Pozantı Bugün